I-Inkscape 1.0 iza ujongano olutsha, izixhobo, uphuculo kunye nokunye | Ubunlog
Emva kweminyaka eliqela yophuhliso, ukumiliselwa kwe Inguqulelo entsha yomhleli wemizobo yasimahla ye vector «Inkscape 1.0 ″. Inkscape inezixhobo ezintsonkothileyo zokuzoba ezinokuthelekiswa neAdobe Illustrator, iCorelDRAW, kunye neXara Xtreme. Ungangenisa ngaphakathi kwaye uthumele ngaphandle iifomathi ezahlukeneyo zefayile, kubandakanya i-SVG, i-AI, i-EPS, iPDF, iPS kunye nePNG.
Inesiseko esipheleleyo sokusetwa, ujongano olulula, inkxaso yeelwimi ezininzi, kwaye yenzelwe ukuba yandiswe, abasebenzisi banokwenza ngokwezifiso ukusebenza kwe-Inkscape ngeeplagi.
Umhleli ubonelela ngezixhobo zokuzoba eziguquguqukayo kwaye ubonelela ngenkxaso yokufunda kunye nokugcina imifanekiso kwi-SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript, kunye neefomathi zePNG.
1 Yintoni entsha kwi-Inkscape 1.0?
2 Uyifaka njani i-Inkscape 1.0 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Yintoni entsha kwi-Inkscape 1.0?
Kolu hlelo lutsha, yongeze inkxaso yemixholo eyahlukileyo kunye neeseti ze icon (ifomathi yokuhambisa ii icon itshintshile) endaweni yokubeka zonke ii icon kwiifayile enye enkulu, i icon nganye ngoku ihanjiswa kwifayile eyahlukileyo.
Ujongano lomsebenzisi lwaluhlaziyiwe, apho amanqaku amatsha amatsha e-GTK + athatha inxaxheba, ukongeza kwi ujongano olutsha luhlengahlengisiwe kwimiboniso ye-HiDPI. Singafumanisa ukuba iindlela zibonelelwa ngokwezifiso ujongano. Umzekelo, ibhokisi yencoko yababini ngoku icwangciswe ngohlobo lweefayile ezimenyezelayo, imenyu inokutshintshwa ngefayile yemenyu.xml, imibala kunye nezimbo zinokutshintshwa ngesitayile.css, kunye nokwakheka kweepaneli kuchazwe kwimiyalelo. -Ibarbar.ui, i-snap-toolbar.ui, khetha i-toolbar.ui, kunye ne-toolbar.ui.
Ngokwenxalenye yokusebenza kwenkqubo kule nguqulo intsha ye-Inkscape 1.0 kwenziwe umsebenzi wokufunda inqaku elinguziro yengxelo ngokunxulumene nekona ephezulu ngasekhohlo, ethi ihambelana nendawo yezixhobo zokulungelelanisa kwifomathi ye-SVG.
Inkqubo ye- ukukwazi ukujikeleza kunye nokujonga isipili (ujikelezo lwenziwa ngevili le mouse ngelixa ubambe ezantsi isitshixo seCtrl + Shift okanye ngokumisela ngesandla i-engile yokujikeleza).
Imowudi yokubonisa entsha yongezwa, apho kungakhathalelwanga kwinqanaba lokusondeza elikhethiweyo, yonke imigca ihleli ibonakala, kunye nendlela entsha ebizwa «Yahlula Imboniselo», ekuvumela ukuba ukhangele kuqala utshintsho kwifom xa ungajonga ixesha elidlulileyo kunye nelizwe elitsha, ngokutshintsha umphetho wotshintsho olubonakalayo.
Kwinxalenye yezixhobo, sinokukufumanisa oko kwisixhobo I-PowerPencil yongezwe ngokusetyenziswa eyahlukileyo yesixhobo Umzobo wepensile otshintsha ubungakanani bomgca ngokusekwe kuxinzelelo lwepensile.
Kwakhona Singayifumana i-Munsell, i-Bootstrap 5 kunye ne-GNOME HIG palettesKunye ne tkunye neziphumo ezintsha "I-Dash Stroke LPE" (ukusebenzisa imigca edibeneyo kwiindlela), i-LPE "I-Ellipse yamanqaku" (ukwenza i-ellipses ngokusekwe kumanqaku aliqela endleleni), i-LPE "iFillet" kunye ne "Chamfer" (ukuya kwiikona ezijikelezileyo kunye nebhere) .
Olunye utshintsho olukhankanyiweyo kolu hlobo lutsha:
Yongeze "ukucima njengeqhotyoshelweyo" ukhetho olungafunekiyo lokucoca nayiphi na into ekliphu, kubandakanya imifanekiso yeeraster kunye neekones.
Kwidayalog yokukhetha imifanekiso yeesimboli, ukhetho lokukhangela luvele.
Inkxaso yokuthumela ngaphandle kwiPDF iyandiswa ngokwazi ukuchaza amakhonkco anokucofa kuxwebhu kwaye uncamathisele imethadatha.
Yongeze incoko entsha yeTrace Bitmap yencoko yemifanekiso ye-raster kunye nemigca.
Kwizikrini zokuchukumisa, iipads, kunye neepads zokuchukumisa, isenzo solawulo siyenziwa ukukala ngokucofa.
Kwi-PowerStroke, uxinzelelo lwebrashi ngoku luhambelana noxinzelelo olusetyenziswe kwithebhulethi yemizobo.
Amandla okubhala ifayile yangoku njengetemplate sele yenziwe. Iitemplate ezongeziweyo zeencwadana ezinemifanekiso kunye namakhadi asongiweyo. Ukongezwa kokhetho ukukhetha izigqibo ze-4k, 4k kunye ne-5k.
Yongeze useto lwangaphandle lokuhambisa ngaphandle kwifomathi yePNG.
Ukongezwa kokhetho lokuthumela ngaphandle uvavanyo kwiifomathi ze-SVG 1.1 kunye nenkxaso yokusongelwa kokubhaliweyo kwi-SVG 2.
Ukuziphatha komyalelo 'weStroke to Path' kutshintshiwe, ngoku ohlukanisa indlela eqokelelweyo ibe ngamacandelo ahlukeneyo.
Isakhono sokuvala ukutsiba ngonqakrazo longezwa kwisixhobo sokwenza izangqa.
Abaqhubi beBoolean abangonakalisiyo bongeziwe ukuze baxhaphaze usetyenziso lweeNdlela eziPhila zeNdlela (i-LPE).
Incoko yababini icetywayo ukuba ikhethe iziphumo ze-LPE.
Incoko yababini yenziwe ukuba iqwalasele iiparameter ezizenzekelayo kwiziphumo ze-LPE.
Kufezekiswe amandla okusebenzisa imithombo enokutshintshwa (xa kudityaniswa nelayibrari yemango 1.41.1+).
Inkqubo yokuyila ngokutsha ebonakalayo, eguqulela kwiPython 3.
Uyifaka njani i-Inkscape 1.0 kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Enye indlela yokufaka ngoncedo lweephakeji zePlppak kwaye ekuphela kwento efunekayo kukuba nenkxaso yongezwa kwinkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » I-Inkscape 1.0 iza ujongano olutsha, izixhobo, uphuculo kunye nokunye
Ndayifaka indawo yokugcina esemthethweni endiyenzileyo Sudo apt-fumana uhlaziyo kwaye ndayifaka inkqubo kodwa ingxelo yangaphambili ifakiwe, 0.92.5 + 68, ayifaki i-1.0
Kwenzeka into efanayo nakum.
UClaudio Segovia sitsho
$ sudo apt-fumana ukufaka inkscape
inkscape sele ikwinguqulelo yayo yakutshanje (0.92.5 + 68 ~ ubuntu18.04.1).
0 ihlaziyiwe, i-0 intsha iya kufakwa, i-0 isuswe, kwaye i-1 ayihlaziywa.
Phendula uClaudio Segovia